Dugsi Ingiriiska ku yaal oo mamnuucay goonada iyo wacdaro lagu dhigey - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Dugsi Ingiriiska ku yaal oo mamnuucay goonada iyo wacdaro lagu dhigey
Dugsi ku yaala Ingiriiska ayaa sheegay inuu mamnuucay goonada ay xirtaan gabdhaha waxase isla markiiba lagu eedeeyay in meel kaga dhacay dookha gabdhaha ee dharka ay xirtaan. ”Dugsiga ayaa ku yaala tuulada Stowmaarkad oo London u jirta ilaa 100km.
”Waxaan sidaa u samayney anagoo niyada ku hayna is-asturnaanta iyo anshaxa. Waxase markiiba lagu qabsaday erayga is-asturnaanta oo dad badan aad ula yaabeen. Waalidiinta qaar ayaa sheegay in ay ka xunyihiin goonada loo diidey.
Halka qaarna taageereen dugsiga. Maamulaha dugsiga ayaa gacmaha kor u taagay oo sheegay in erayga laga xanaaqay ee is-asturnaanta uu u dhacay si QALADA.
Waxa baryahan jirtey dugsiyada qaar in muraayado lagu rakibey jaranjarada taas oo marka gabdhuhu soo koraan ay wiilashu ka fiiriyaan gabdhaha goonada xidhan nikiskooda taas oo cabasho laga keenay.
Si kastaba ha ahaatee waxaad ogaan kartaa in erayga is-astru anu ku jirin qaamuuska Ingiriiska laga xanaaqo lana rabo in la qaawanaado. Ingiriiska ayaa ka mida wadamada ugu kufsiga badan Yurub inkastoo gabdhaha badankoodu iska qarsadaan.